Ifulethi uRobert - I-Airbnb
Iyunithi yokuhlala encinci, epholileyo enekhitshi-igumbi lokuhlala, ibhentshi yekona kunye netafile, i-sofa kunye nebhedi ye-sofa (kumntu we-4 - kunokwenzeka), izibonelelo zococeko kunye negumbi lokulala elahlukileyo elineebhedi ezintathu ezingatshatanga. Indawo yokuhlala inomnyango wayo kunye negadi yangaphambili. I-TV kunye ne-WiFi ziyafumaneka. Awunaxhala ngendawo yokupaka.
Unayo into oyifunayo-ukuphila kwaye uzive ulungile. Ukulala kunye nokutya, yintoni enye into efunwa ngabantu - intuthuzelo, ukucoceka, ukulula, uxolo kunye nokuzola.
iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2, 1 iisofa eziyi-, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1
Kwihlabathi elitsha phakathi kweFischauer Vorbergen kunye neHohe Wand, le yintlambo epholileyo ye-traffic enombono omkhulu weentaba, apho abakhweli kunye neeparagliders nazo zinokufumaneka. Kufuphi kakhulu eWiener Neustadt okanye eNeunkirchen ulapho uyokuthenga, inkcubeko okanye umsebenzi. Ukusuka apho, kwakhona, kuhle ukuhlala kwindalo enhle kumgama we-15 km - inomgangatho wobomi.
Sihlala endlwini kwaye sihlalisa abantu abafuna ukuchitha ubusuku kwi-Hohe Wand Nature Park, nokuba bakwiholide, basebenza okanye batyelele abahlobo. Nokuba umfuyi wezinja, umthandi wamahashe, umkhweli, umhambi weshishini, umkhandi, umfundi, umkhweli - siyakwamkela ngokufudumeleyo.
Sihlala endlwini kwaye sihlalisa abantu abafuna ukuchitha ubusuku kwi-Hohe Wand Nature Park, nokuba bakwiholide, basebenza okanye batyelele abahlobo. Nokuba umfuyi wezinja, umthand…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Maiersdorf